7 O wee ruo n’ụbọchị Mozis wusịrị ụlọikwuu+ ahụ na o tere ya mmanụ+ ma doo ya nsọ, ya na ngwongwo ya niile na ebe ịchụàjà ahụ na arịa ya niile. O wee tee ha mmanụ ma doo ha nsọ.+ 2 Ndị isi Izrel,+ bụ́ ndị isi nke ụlọ ndị nna ha, wee nye onyinye,+ ha bụ ndị isi nke ebo dị iche iche, bụrụkwa ndị isi nke ndị e debara aha ha n’akwụkwọ, 3 ha wee weta onyinye ha n’ihu Jehova, ya bụ, ụgbọala isii e kpuchiri elu ha ekpuchi na ehi iri na abụọ, otu ụgbọala maka ndị isi abụọ nakwa otu oké ehi maka otu onye; ha wee weta ha n’ihu ụlọikwuu ahụ. 4 Jehova wee sị Mozis: 5 “Nata ha ihe ndị ahụ, n’ihi na a ga-eji ha na-eje ozi n’ụlọikwuu nzute, ị ga-ewerekwa ha nye ndị Livaị, onye nke ọ bụla, dabere n’otú ọrụ ya hà.” 6 Mozis wee nabata ụgbọala ndị ahụ na ehi ndị ahụ ma buru ha bunye ndị Livaị. 7 O nyere ụmụ Geshọn ụgbọala abụọ na ehi anọ, dabere n’otú ọrụ ha na-arụ+ hà, 8 o nyekwara ụmụ Meraraị ụgbọala anọ na ehi asatọ, dabere n’otú ọrụ ha na-arụ+ hà, ọ bụ Ịtama nwa Erọn bụ́ onye nchụàjà+ ka o nyefere ha. 9 Ma ọ dịghị nke o nyere ụmụ Kohat, n’ihi na ọ bụ ha na-ebu+ ihe ndị e ji eje ozi n’ebe nsọ ahụ. N’ubu ka ha na-ebu ibu ha.+ 10 Ndị isi ahụ nyere onyinye ha mgbe a na-arara ebe ịchụàjà ahụ nye,+ n’ụbọchị e tere ya mmanụ, ndị isi ahụ wee nye onyinye ha n’ihu ebe ịchụàjà ahụ. 11 Jehova wee gwa Mozis, sị: “Otú ha ga-esi enye onyinye ịrara ebe ịchụàjà ahụ nye bụ na otu onyeisi ga-enye nke ya n’otu ụbọchị, onyeisi ọzọ enye nke ya n’ụbọchị ọzọ.”+ 12 Onye nyere onyinye ya n’ụbọchị nke mbụ wee bụrụ Nashọn+ nwa Aminadab nke ebo Juda. 13 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya,+ ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka* e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 14 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru;+ 15 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 16 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 17 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Nashọn nwa Aminadab.+ 18 N’ụbọchị nke abụọ, Netanel+ nwa Zua, bụ́ onyeisi Ịsaka, nyere onyinye. 19 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 20 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru; 21 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 22 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 23 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Netanel nwa Zua. 24 N’ụbọchị nke atọ, onyeisi ụmụ Zebulọn, bụ́ Elayab+ nwa Hilọn, wetara nke ya. 25 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka; 26 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru; 27 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 28 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 29 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Elayab nwa Hilọn.+ 30 N’ụbọchị nke anọ, onyeisi ụmụ Ruben, bụ́ Elaịzọ+ nwa Shedeọ, wetara nke ya. 31 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 32 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru; 33 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 34 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 35 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Elaịzọ nwa Shedeọ.+ 36 N’ụbọchị nke ise, onyeisi ụmụ Simiọn, bụ́ Shelumiel+ nwa Zurishadaị, wetara nke ya. 37 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 38 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru; 39 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 40 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 41 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Shelumiel nwa Zurishadaị.+ 42 N’ụbọchị nke isii, onyeisi ụmụ Gad, bụ́ Elayasaf+ nwa Duel, wetara nke ya. 43 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 44 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru;+ 45 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 46 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 47 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Elayasaf nwa Duel.+ 48 N’ụbọchị nke asaa, onyeisi ụmụ Ifrem, bụ́ Elishama+ nwa Amaịhọd, wetara nke ya. 49 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 50 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru; 51 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 52 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 53 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Elishama nwa Amaịhọd.+ 54 N’ụbọchị nke asatọ, onyeisi ụmụ Manase, bụ́ Gameliel+ nwa Pedazọ, wetara nke ya. 55 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 56 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru;+ 57 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 58 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 59 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Gameliel nwa Pedazọ.+ 60 N’ụbọchị nke itoolu, onyeisi+ ụmụ Benjamin, bụ́ Abidan+ nwa Gidionaị, wetara nke ya. 61 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 62 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru; 63 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 64 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 65 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Abidan nwa Gidionaị.+ 66 N’ụbọchị nke iri, onyeisi ụmụ Dan, bụ́ Ahayiza+ nwa Amishadaị, wetara nke ya. 67 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 68 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru; 69 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 70 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 71 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Ahayiza nwa Amishadaị.+ 72 N’ụbọchị nke iri na otu, onyeisi ụmụ Asha, bụ́ Pegiel+ nwa Ọkran, wetara nke ya. 73 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 74 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru;+ 75 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 76 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 77 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Pegiel nwa Ọkran.+ 78 N’ụbọchị nke iri na abụọ, onyeisi ụmụ Naftalaị, bụ́ Ahaịra+ nwa Inan, wetara nke ya. 79 Onyinye o nyere bụ otu efere e ji ọlaọcha mee, nke dị otu narị shekel na iri atọ n’ịdị arọ, otu ọkwá e ji ọlaọcha mee, nke dị shekel iri asaa, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya, ha abụọ jupụtara ná ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, maka àjà ọka;+ 80 otu iko e ji ọlaedo mee, nke dị shekel iri, nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru;+ 81 otu nwa oké ehi, otu ebule, otu nwa ebule nke na-agafebeghị otu afọ, maka àjà nsure ọkụ;+ 82 otu nwa ewu maka àjà mmehie;+ 83 o nyekwara ehi abụọ, ebule ise, mkpi ise, ụmụ ebule ise ndị gbara otu afọ otu afọ, maka àjà udo.+ Ọ bụ nke a bụ onyinye Ahaịra nwa Inan.+ 84 Ihe ndị a bụ onyinye+ e nyere iji rara ebe ịchụàjà ahụ nye n’ụbọchị e tere ya mmanụ, bụ́ nke ndị isi Izrel nyere: efere iri na abụọ e ji ọlaọcha mee,+ ọkwá iri na abụọ e ji ọlaọcha mee, iko iri na abụọ e ji ọlaedo mee; 85 efere ọlaọcha nke ọ bụla dị otu narị shekel na iri atọ, ọkwá nke ọ bụla dị shekel iri asaa, ọlaọcha dum e ji mee arịa ndị ahụ wee dịrị puku shekel abụọ na narị anọ, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ya;+ 86 iko+ ọlaedo iri na abụọ ahụ, ndị ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juru, dị shekel iri shekel iri, ma e jiri shekel ebe nsọ tụọ ha, ọlaedo dum e ji mee iko ndị ahụ wee dịrị otu narị shekel na iri abụọ; 87 anụ niile a ga-eji chụọ àjà nsure ọkụ+ wee bụrụ oké ehi iri na abụọ, ebule iri na abụọ, ụmụ ebule iri na abụọ ndị gbara otu afọ otu afọ na àjà ọka+ ha, nakwa ụmụ ewu iri na abụọ maka àjà mmehie;+ 88 anụ niile a ga-eji chụọ àjà udo+ wee dịrị oké ehi iri abụọ na anọ, ebule iri isii, mkpi iri isii, ụmụ ebule iri isii ndị gbara otu afọ otu afọ. Ọ bụ ihe ndị a bụ onyinye e nyere iji rara ebe ịchụàjà ahụ nye+ mgbe e tesịrị ya mmanụ.+ 89 Mgbe ọ bụla Mozis banyere n’ụlọikwuu nzute ka ya na ya kwurịta okwu,+ ọ na-anụ olu si n’elu ihe mkpuchi+ ahụ nke dị n’elu igbe ihe àmà na-akpanyere ya ụka, n’agbata cherọb+ abụọ ahụ; Ọ na-agwakwa ya okwu.